Umlingisi uphunyuke kukubi kwiCovid-19
UTHANDO Thabethe uphunyuke kukubi kwiCovid-19 Isithombe: ESIGCINIWE
Charles Khuzwayo | July 18, 2021
OWAYENGUMLINGISI weGenerations, uThando "Thaboots" Thabethe, udalule ubunzima ngemva kokusinda kukubi kwiCovid-19.
Ukhuluma kanjena nje, kulezi zinsuku iCovid-19 isibulale abantu abangaphezu kuka-6000 selokhu kuqale isiwombe sesithathu ngenyanga eyedlule. Kwasebeshonile kubalwa nosaziwayo uSteve Kekana, Pat Shange, Tsepo Tshola, Mutodi Neshehe nabanye.
Ekhasini lakhe le-Instagram, uThando osakaza uhlelo lwantambama kwi-947 futhi owayenguNolwazi Buzo kwiGenerations, uthe usenezinsuku eziwu-10 edliwa wumzwangedwa womvalelandlini emuva kokutholakala enegciwane leCovid-19.
"Ngangingakaze ngakucabanga ukuhlukumezeka engihlangabezane nakho. Kangikaze ngicabange ukuzivalela endlini izinsuku ezilishumi ehhotela ngingedwa vo! Kungekho msebenzi engiphuthuma kuwo, engekho ozongisiza ngemishanguzo noma abangani ebebezonganga. Bekuyimi nemicabango yami."
Eqhuba uThando uthe kunezinsuku lapho ebengazi noma uzolubona yini usuku olulandelayo, ngendlela abexineke ngayo.
"Bekuba nobusuku ebengiyolala ngabo nginethemba lokuthi ngizovuka kusasa."
Ubonge uNkulunkulu ngoba ukwazile ukusakaza uhlelo lwakhe ngisho esehhotela. Ubuye watusa abasebenzi basehhotela ngokumnakekela.
"Njengoba ngihamba lapha kusasa, kangazi ukuthi ngizobhekana kanjani neqiniso engizobhekana nalo. Kuyasabisa kodwa ngiyabonga ngesipho sempilo enginikezwe sona," kuphetha uThando ongumlingisi ophambili kwiHousekeepers.